Imveliso-iZhongshan City City YALIS Hardware Products Co, Ltd.
Ukuphucula imveliso ngokukuko, i-YALIS yazisa ngetekhnoloji entsha yoLawulo lweNombolo yeComputer (CNC). Xa kuthelekiswa nezixhobo zomatshini eziqhelekileyo, i-CNC isebenzisa ulwazi lwedijithali ukulawula ukuhamba nokulungiswa kwezixhobo zomatshini, ezinokuthi zigqibe ukwenziwa kobunzima ngomgangatho ophezulu kunye nokuchaneka. Ngo-2020, ukongeza ukwazisa oomatshini be-CNC, i-YALIS iyakongeza umatshini wokucoca ngokuzenzekelayo, umatshini wokuqhuba ngokuzenzekelayo kunye nezinye izixhobo. Ngezi zixhobo, i-YALIS iyiphucule kakhulu imveliso yayo kunye namandla okuvelisa, kwaye inkqubo yayo yemveliso iphuculwe ngakumbi.
I-2020 ngunyaka wokuqala i-YALIS yavula umzi-mveliso wayo okrelekrele wokuvelisa. Ngokuqaliswa okuqhubekayo koomatshini bokuphosa abafayo ngokuzenzekelayo, oomatshini bokucoca ngokuzenzekelayo, iipakethe ze-screws ezizenzekelayo kunye nezinye izixhobo ezizenzekelayo, kunye nokongezwa kwabasebenzi bezobuchwephesha, inkqubo yokuvelisa iye yafakwa amandla. Kwangelo xesha, i-YALIS yomeleze ukhetho kunye nokulawulwa kwenkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo, iseke inkqubo yolawulo lokuhanjiswa kweenkonzo, kwaye yomeleza amandla okulawula abathengisi.
Umatshini woVavanyo lweTyuwa
Zenzekelayo Die-eyahlulayo Machine
Ukubekwa emgangathweni kwenkqubo ye-ISO yefektri, ukuphucuka okuqhubekayo kwamandla emveliso, ulawulo olungqongqo lomgangatho weemveliso ezenziwe ngokwezifiso kunye neemveliso eziqhelekileyo kunye nokuzinziswa kokuhanjiswa kwenza ukuba i-YALIS ihambisane nabathengi kukhuphiswano oluqatha kwixesha elizayo kwaye ihlangabezane neemfuno ezahlukeneyo abathengi.
Oluzenzekelayo wokucoca Machine
Umatshini wokuLawula amanani ekhompyuter
Umatshini wovavanyo lomjikelo